Kupona Bracelet & Paracord Fekitori - China Kupona Bracelet & Paracord Vagadziri uye Vatengesi
Wakatarisa "kupona musango"? Muchirongwa ichi, nyeredzi ine mukurumbira inosunga mabhandara ekupona & paracord. Izvo zvirinani zvakakosha maturusi ekupona musango. Chishongo chekupona chiri muti-unoshanda, unosanganisira maturusi mazhinji anoshanda senge banga, mitemo, chirauro checabiner, kambasi, barometer uye nezvimwe. Compass inowanzo shandiswa musango kutungamira nzira yako kudzivirira kubva pakurasika. Banga rinobatsira kurodza mapazi kana pachinge pachidiwa musango. Paracords inofanirwa kana iwe uchikwira musango. Iyo nharaunda musango yakakosha, izvi zvinogona kukubatsira iwe, pamwe ponesa hupenyu hwako. Kunyangwe uchishandisa musango, izvi zvinogona kuve zvishandiso zvekupona muhupenyu hwezuva nezuva kudzivirira kubva mukukuvadzwa nevano kutyora mutemo. Iyo mold ndeye mahara kana iwe ukasarudza edu aripo magadzirirwo, 350/480/550 Paracord uye plastiki bhandi. Inogona kuwedzera logo ye laser yakatemerwa pane yepurasitiki bhureki kana inogona kuwedzera neayo tag tag. Saizi yakaenzana ndeye 205 (L) * 22 (W) mm yeiyo bracelet. Kana kana vatengi vachisarudza kune yakasarudzika saizi, inogamuchirwa. Kushanda nesu, iwe unozove unoyevedza pazvinhu zvekugadzira, mhando, nguva yekuendesa, uye yakanakisa mushure mekutengesa sevhisi.
Kupona zvishongo nemapacacarac